Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Spain Sheekada Caruurnimada ee Adama Traore Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Cusboonaysiinta ugu dambeysay July 2, 2020
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan magaca ugu wanaagsan "Usain Bolt". Sheekadeena Carruurnimada Adama Traore Plus Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Sare u qaadida Adama Traore. Dhibcaha Sawirka: Madax-bannaan, SportsMole, Joe iyo FC-Barcelona
Haa, qof walbaa wuu ogyahay waxa ku saabsan dhiskiisa muruqyadiisa iyo xawaaraha taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah garoomada ugu dheereeya FIFA iyo adduunka. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa ka fiirsanaya Adama Traoretaariikh nololeedkiisa oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Laga bilaabo, Magacyadiisa oo dhammaystiran waa Adama Traoré Diarra. Adama Traore sida loogu yaqaan badanaa wuxuu ku dhashay maalinta 25th ee Janaayo 1996 hooyadiis, Fatoumata iyo aabaha, Baba Traoré gudaha degmada L'Hospitalet de Llobregat, koonfurta-galbeed ee Barcelona. Waa wiilka labaad iyo cunugga sedex caruur ah oo ay dhaleen waalidkiis jecel.
La kulan waalidiinta Adama Traore- hooyadiis (Fatoumata) iyo aabe (Baba). Amaahda IG
Waalidka Adama Traore waa muhaajiriin Isbaanish ah oo asalkoodu ka soo jeedo / asal ahaan ka soo jeedo Mali, oo ah dal aan lahayn meel ku yaal Galbeedka Afrika. Kaliya talo Wadanka Galbeedka Afrika ee Maali wuxuu ka kooban yahay kala badh saxaraha Sahara waana dalka sideedaad ee ugu weyn qaarada Afrika.
Khariidad muujineysa waddanka Mali - Adama Traore Family Origin. Astaanta Sawirka: TheFactFile
Adama Traore waalidkiis waxay ka soo tageen wadankoodii Mali si ay u degaan Barcelona, ​​magaalo ay rumeysan yihiin inay siinayso fursado wanaagsan carruurtooda. Waxay ahayd go'aan kaas oo la bixiyay.
Markii uu weynaaday, Adama Traore ma uusan ahayn qaar ka mid ah xiddigaha kubada cagta (tusaale ahaan.) Gerard Pique, Mario Gotze iyo Hugo Lloris) oo ku noolaa nolol qanacsanaan kahor intaanu gaadhin xasaanad. Wuxuu ka yimid asal qoys dabaqadda dhexe ah, mid ay waalidkood leeyihiin awoodin inuu awoodo inuu aruuriyo aruurinta cusub ee alaabta carruurtu ku ciyaarto isaga oo ah ilmo, kaliya kubada cagta.
Adama wuxuu ku barbaaray walaalkiis ka weyn Moy iyo walaashiis qurxoon, Asa oo ku nool guri jecel kubada cagta. Ka dib markii lagu soo barbaaray magaalada Isbaanishka ee Barcelona, ​​waxay ahayd wax caadi ah isaga iyo qoyskoo dhan inay jaceyl u qabaan ciyaarta quruxda badan ee kubada cagta oo ay uga mahadcelinayaan FC Barcelona.
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Jacaylka ciyaarta ayaa ka adkaaday ciyaaraha kale iyada oo Adama iyo walaalkiis Moh ay bilaabeen in ay ku daaqaan kubbada cagta ee dariska la ah CE L'Hospitalet. Wax yar ka dib, labadooduba waxay bilaabeen inay ku qaataan barashada kubada cagta Center D'Esports L'Hospitalet, naadi halkaas oo labadooduba ay ku sameeyeen horumar la yaab leh.
Adama Traore wuxuu ku qaatay waxbarashadiisii ​​ugu horreysay ee kubada cagta K / Cagta Kubadda Cagta CE L'Hospitalet. Dhibcaha Sawirka: BBDFutbool,& Joe.
Goor hore, labada walaalo waxay yaqiinsadeen inay leeyihiin hibo iyo wax weyn oo kubada cagta ah. Ku socota waalidkood iyo xubnaha qoyska, marna shaki badan kama qabin in Moha iyo Adama ay ku sii jeedeen jihada saxda ah. Waxay ahayd Adama Traore oo si ka dhaqso badan walaalkiis u sameeyay maxaa yeelay isagu wuxuu ahaa nin karti badan.
Sannadkii 2004, riyooyinkii reerka Traore ayaa lasiiyay. Akadeemiyada caanka ah ee FC Barcelona La Masia ayaa ku casuumay Adama tijaabooyin. Walaalkiis Moh waxaa ku casuumay deriska Espanyol laba sano kadib.
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Mudnaanta Hore
Waqti yar ka dib CE L'Hospitalet oo deris la ahaa, tijaabo lagu guuleystay ayaa la arkay Adama Traoré oo ku soo biirtay akadeemiyada caanka ah ee kooxda Barcelona ee La Masia 2004 da'da siddeed jirka ah.
Nolosha Adama Traore ee La Masia - FC Barcelona Academy. Astaanta Sawirka: Joe
Waqtigaas iyo waqtiga xaadirka ah, waxay ahayd riyo ilmo kasta inuu ku biiro La Masia, oo ah mid ka mid ah akadeemiyada kubbadda cagta adduunka ugu weyn. Markii ay ku soo biirtay waxay u ahayd madadaalo Adama yar. Si uu ula kulmo tartan adag, wuxuu ku qasbay inuu sameeyo allabaryo badan sida dhalashooyinka dhalanaya iyo waxyaabaha uu guriga ku sugayay. Dhammaan allabaryadaas waxaa loo baahan yahay si isaga hore ugu yeelo naadiga.
Ma ogeyd?… Sannadku (2004) oo Adama ku soo biirey La Masia ayaa ku soo beegmay sannadka Lionel Messi wuxuu ku qarxay goobta ay ku sugnaayeen kubbadda cagta. Waqtigaas, Adama iyo carruurta kale dhammaantood waxay raacday raadadkii geesiyaasheedii AKA La Pulga (GOAT).
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Waddada loogu talagalay sheekada
Wadada La Masia, Adama wuxuu sii waday inuu muujiyo horumar isaga oo u sii gudbay darajooyinka akadeemiyada. In kasta oo uu gaagaaban yahay, xooggiisa, xooggiisa iyo xawaaraha hillaaca wuxuu ka dhigay mid caan ku ah heerka dhallinyarada. Ma ogeyd? Adama Traore wuxuu kasbaday naaneyska 'Usain Bolt'sababtoo ah xawaaraha uu ku qarxay muddadii uu ku sugnaa Barcelona La Masia akadeemiyadda
Adama Traore wuxuu ka garab ciyaaray kooxaha ka soo hor jeeda sida ka weyn uguna weyn isaga. Ku mahadsanid FC-Barcelona
Maaddaama uu fiicnaa, Adama waxaa si joogto ah loogu adeegsan jiray dadka ka soo horjeedda kooxaha da'da ah iyo wuu ka horyimid ciyaartoy da 'weyn oo isaga ka weyn. Waxaa loo adeegsaday daafaca midig iyo weeraryahan intii uu noolaa La Masia.
In kasta oo carruurta kale lagu tuuray akadeemiga La Masia ee aadka loo tartamayay waxqabadka awgood, Adama Traore ma ahayn sidii uu ugu fiicnaa samaynta hamigiisa shaqadiisa. Hoos waxaa ku yaal caddeymo fiidiyow ah oo muujinaya muuqaallada cajiibka ah ee kubbadda cagta intii uu joogay La Masia. Dhibcaha Gaarka ah ee loo yaqaan 'AirFutbol'
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Kusoo sharax sheekada
Sannadkii 2013, Adama Traore wuxuu si caadi ah ula midoobay kooxda Barcelona B, wuxuu xirmay in ka badan kulamada Horyaalka 40 ee kooxda. Wuxuu gacan weyn ka galiyay ka caawinta kooxda Barcelona B sidii ay ugu guuleysan laheyd 2014 UEFA Youth League.
Adama Traore ayaa u dabaaldegaya UEFA League League asxaabtiisa. Astaanta Sawirka: TalkSports
Isla sanadkaas, Adama wuxuu kulankiisii ​​ugu horreeyay u saftay kooxdiisii ​​hore ee FC Barcelona markii uu bedelay Neymar guul La Liga ah. Sababtoo ah qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa ee kooxda FC Barcelona B iyo kooxdii waa weyn ee uu ku soo bilaabay, kooxaha Yurub oo dhami waxay eryanayeen saxiixiisa.
14 Agoosto 2015, Adama Traoré wuxuu ku biiray naadiga Premier League Aston Villa iyo sanad kadib, Middlesbrough halkaas oo uu ku sii waday inuu isticmaalo Xawliga inay dhibaatooyin dhowr ah u keenaan difaacayaasha mucaaradka. Guushii Adama Traore ee ugu fiicneyd ee uu la gaaro Boro ayaa timid markii caanka la ahaa hat-trick abaalmarin taas oo ah; “(1) Cayaaryahanka sanadka ee Middlesbrough, (2) Laacibka da'da yar ee kooxda Middlesbrough iyo (3) Cayaaryahannada Middlesbrough ee sanadka.
Adama Traore oo la soo bandhigaya mid ka mid ah Abaalmarintiisii ​​Middlesbrough. Ku mahadsanid Shabakada Rasmiga ah ee Middlesbrough
Guushii Adama Traoré ee Middlesbrough waxay soo jiidatay Wolverhampton Wanderers oo aan ku hungoobin inay iibsato. Macalinkiisa, Nuun Espírito Santo wuxuu ku gaadhay guul weyn howshiisa adeegsiga xawaarehiisa iyo xooggiisa dhanka weerarada si loo ciqaabo lugaha daallan ee ka soo horjeedda.
Adama Traore- Waxaa loo adeegsaday dhamaadka ciyaarta hubka si loo ciqaabo kuwa ka soo horjeed
Xusuus-qor xusuus leh, xawaaraha iyo awoodda Adama Traore ayaa inta badan lagu dhejiyay 6th of October 2019. Waxay ahayd maalintii ay Adama go'doomin ka dhigteen Pep GuardiolaKooxda adag ee Man City sida uu dhaliyay labo gool guul marti ah (0-2), oo ah runti waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waa weyn ee lagu muujiyey mustaqbalkiisa ciyaareed.
Maalintii Adama Traore wuxuu ciqaabay Man City. Ku mahadsanid 90Min
Haatan shaki la'aan, Adama waxay ka dhigtay taageerayaasha kubada cagta inay rumeysan yihiin in xawaaraha iyo awooddu ay yihiin waxyaabaha looga baahan yahay ciyaartoy casri ah. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, hadda waa taariikh.
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Xiriirka
Kordhintiisa caannimada iyo caannimada qaasatan FIFA, taageerayaal badan ayaa ka fikiray inay ogaadaan bal in Adama Traore uu leeyahay gabar saaxiib ama xaas leh. Shaki la'aan, muuqaalkiisa iyo muuqaalkiisa wanaagsan ayaa hubaal ka dhigaya inuu ku jiro liiska wiilka ay jecel yihiin ee taageerayaasha dumarka badankood.
Waa kuma Adama Traore Gabadha saaxiibka ah ?. Amaahda IG
Sida wakhtigii qorista, waxaan ogaanay inaysan jirin raad raac ah oo Adama ay ku hayso gabar ay saaxiibo yihiin ama xiriir la leeyahay. Laga soo bilaabo waxay u muuqataa, wuxuu door bidaa inuu diirada saaro mustaqbalkiisa kubada cagta. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnaa dhalinyaro badan oo kubada cagta ah oo u dhaqma qaabkan si ay uga hooseeyaan marxaladaha muhiimka ah ee shaqadooda. Waxay kaloo noqon kartaa in Adama ay leedahay gabar ay saaxiibo yihiin laakiin waxay door bidaa inuusan xiriirkiisa la sameynin dadkeeda ugu yaraan hadda.
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Naftaada Shaqsiga
Inaad ogaato nolosha Adama Traore ee garoonka waxay kaa caawin doontaa inaad sawir wanaagsan ka hesho isaga. Adigoo ka bilaabaya, muuqaalka koowaad ee Adama, waad arki kareysaa bilowga wax firfircoon iyo jahwareer. Meel ka baxsan garoonka, wuxuu si gaar ah fiiro gaar ah u siiyaa jimicsigiisa jimicsiga, sababna u ah muruqyada badan ee jirka iyo jirka.
Wareysi uu siiyay Marca, Adama waxay sheegatay mid ka soo horjeedda, in uusan ahayn culeys qaada. Erayadiisa; Ma aanan qaadin hal culeys. Waan ogahay in dadku aysan rumaysan doonin, laakiin waa run. ”. Su’aashu waxay tahay; Do adigu kuwa akhrinaya maqaalkan ayaa rumeysan waxa uu yiri xitaa markaad u fiirsato sawirkan isaga oo ah kubbadda cagta 17-sano jir ah?…
Sawirka Adama Traore oo ah kubadsameeyaha 17-sano jir ah. Astaanta Sawirka: Kubadda cagta
Marka labaad, noloshiisa gaarka ah, Adama Traore waa qof had iyo jeer haysta wax uu adduunka ku soo bandhigo wax aan ahayn oo aan ahayn.SpeedWuxuu keenayaa ciyaarta kubada cagta. Waxaa laga yaabaa inaadan ka mid noqon Messi iyo C Ronaldo, laakiin Adama Traore wuxuu abuuray adduunkiisa weynaantiisa sida lagu xusay Abaalmarinta FIFA18. Caddaynta fiidiyowga (hoosta).
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Nolosha Qoyska
Tirada guud ee muhaajiriinta 55,000 ee reer Malyaanka ah ee ku noolaa Spain (Warbixinada Efe), qoyska Adama Traore ayaa ka mid ah kuwa guuleysta ee magacooda isu sameeyay. Qoyska ayaa loo xisaabinayaa iyagoo ku qasbaya jidkooda u gaarka ah madax-bannaanida dhaqaale iyagoo adeegsanaya kubada cagta qaab ahaan.
Adama Traore Dad: Aabihiis oo si fudud loogu diro naanaysta “hag”Waa reer Mali saafi ah asal ahaan. Markaad eegto Baba sawirka hoose wiilkiisa, hal shay baa ku soo dhaca maskaxda. Waa qaab dhismeedka jirka aabe iyo wiil labadaba. (muruqyadaas ayaa dhista!). Waxaad si fudud u soo gunaanadi kartaa in Adama uu qaatay ka dib markii aabihiis jirkiisa uu dhiso.
Adama Traore wuxuu la dhashay aabe. Dhibcaha: IG
Baba sida aabayaal badan oo wanaagsan ayaa door muhiim ah ka geysan jiray taageerada Adama inta uu joogay warshaddii kubada cagta ee Catalonia.
Adama Traore hooyadiis: Fatoumata waa magaceeda badanaana waxaa loogu yeeraa 'hooyada taageerada leh'. Sida ay sheegtay wiilkeeda Adama; "Hooyaday waligeed way i taageeri jirtay, meelwalba bay iga kaxayn jirtay oo waxay ii qaadday sidii dhalinyaro dhalinyaro ah. Waxay xitaa ila joogtay, oo i tusaysa taageero, maalintii aan u saxeexay Wolves. "
Adama Traore iyo hooyadiis. Dhibcaha: IG
Adigoo ka duulaya sawirkooda kore, waxaad u sheegi kartaa in jacayl kalgacal leh oo jacayl ah uu u dhexeeyo Adama iyo Fatoumata, oo ah kan ka sarreeya dhammaan waxyaalaha kale ee qalbigooda jecel.
Walaasha Adama Traore: Hoos waxaa ku yaal cunugga quruxda badan ee Adama oo ku baxa magaca Asa. Waxay joogtaa waqtiga qorista, waxay ku nooshahay Spain badiyaana waxay booqataa walaalkeed weyn ee England.
Adama Traore wuxuu la yimid walaashiis Asa. Dhibcaha: IG
Walaalkiis Adama Traore: Mohamed Traoré Diarra oo sidoo kale ku yaqaan naanays “MoogeWaa walaalkii weynaa Adama. Moha (wuxuu ku dhashay 29th November 1994) oo labo sano ka weyn Adama sidoo kale wuxuu kubbadda cagta xirfad u yeeshay.
La kulan Adama Traore walaalkiis- Moo. Astaanta Muuqaalka: Nkistra. Amaahda IG
Iyada oo ay tahay hab lagu bixiyo daacadnimada xididdada qoyskiisa, Moodaha ku yaal 17th ee Febraayo 2014 wuxuu ka beddelaa u ciyaarista Spain si uu ugu ciyaaro Mali. Waqtiga qorista, wuxuu haatan u ciyaaraa kooxda weerarka ka ciyaara ee Hércules kooxda Segunda División B taasoo ah heerka seddexaad ee nidaamka horyaalka kubada cagta Spain.
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - nololeedka
Loogu talagalay kubbadda cagta 2.6 Milyan Euro (2.2 Million Pound) sanadkiiba waqtiga qoraalka, runti waxaa jira lacag ku filan nolosha caadiga ah. Guusha Adama Traore ee dhaqaalaha waxay si toos ah ugu xidhantahay qaab ciyaareedkiisa kubada cagta.
Sameynta lacago fara badan uma gudbo nolol nololeed qalaad oo si fudud looga arki karo ciyaartoy muujinaya guryo waaweyn iyo baabuurta gubashada leh. Adama Waa mid caqli badan habka uu u maareeyo dhaqaalihiisa. Wuxuu kaxeynayaa gaari celcelis ah wuxuuna ku nool yahay celcelis ahaan qaab nololeed kubbadda cagta.
Xaqiiqda Nolosha Adama Traore. Credits Image: CNBC, IG iyo Ganacsiga Arab. Ku ammaano Twitter
Sheekada Carruurnimada Adama Traore iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Aan La Qarxin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Waqtiga ugu hooseeya ee Shaqadiisa: Janaayo 2016 waxaa loo duubay mid ka mid ah daqiiqadihii ugu xumaa ee mustaqbalkiisa. Ma ogeyd?… Adama Traore ayaa laga ceyriyay kooxda sarsare ee kooxda Aston Villa sababta oo ah marar badan oo is daba marin la’aan ah. Go'aankani wuxuu saameyn xun ku yeeshay kooxdiisii ​​iyadoo kooxdiisu ay ka dhacday heerka koowaad ee horyaalka Ingiriiska dhammaadka xilligaas.
Wuxuu leeyahay CV wanaagsan: Caan badan oo kubada cagta ah ayaa kudhamaaday Adama Traore inta ay ciyaarayeen FIFA iyo dabcan Wolves. Runtu waxay tahay, xawaaraha iyo kubada cagta awooda fog wuxuu u yimid si fog sida laga soo xigtay CV-giisa kaasoo ka hadlaya cabirkiisa guusha.
Adama Traore Tirada Mudnaanta Sharafta.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Taariikhda Caruurnimada ee Adama Traore iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Wolverhampton Wareysiga Kubadda Cagta
Sheekada Isco Carthouse Plus Xogta Warka Xogta Leh